के भन्छन् ‘साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार’का लागि छानिएका स्रष्टाहरू ? | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट प्रकाशित १२ बैशाख २०७८ १७:०१
यहाँ केदार वाशिष्ठ (अनुसन्धान), चाेटदेखि मृत्युसम्म (लघुकथासङ्ग्रह) र रहर (कथासङ्ग्रह) का स्रष्टासँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ । बाँकी स्रष्टासँगको संवाद क्रमशः प्रकाशन गरिने छ ।
१. नेपाल विद्याः केदार वाशिष्ठ
२. चाेटदेखि मृत्युसम्म (लघुकथासङ्ग्रह) : लता केसी
जित हो, हल्का खुसी त लाग्यो नै तर, ‘के के नै भयो ?’ जस्तो चाहिँ भएन । भावनामा खासै उथुलपुथुल भएन । पुष्प सरले (शिखा बुक्स) पहिलोपटक खबरबारे जानकारी दिनुभयो, मेसेन्जरमा । साहित्यिक पोस्ट हेरेँ, र निश्चित भएँ ।
वर्तमानमा साहित्यभित्र लघुकथा मेरो फुर्सदको समयको रुचि मात्र हो । यो पुरस्कार नवोदित लेखकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि प्रदान गरेकोमा अत्याधिक खुसी लागेको छ, आयोजक पक्कै पनि प्रशंसाको पात्र बनेको छ । पुरस्कार र सम्मान भनेका प्रोत्साहन हुन्, पक्कै पनि तर यही पुरस्कारले हौसिएर मेरो साहित्यिक यात्रा यस्तो होला भन्नुभन्दा पनि समय, अवस्था र रूचिले तय गर्नेछ भन्ने ठान्दछु ।
मैले यो विषयमा आफ्नो कृतिभित्र मेरा भनाइमा विस्तृत रूपमा राखेकी छु । लघुकथा लगभग पुग्ने भएपछि म प्रकाशनतिर लागेँ । करिब छ महिनाको परिश्रम खर्च गरेँ ।
“चाेटदेखि मृत्युसम्म” नै किन लेख्नुभयो ? पाठकले किन पढ्ने ?
चोटदेखि मृत्युसम्मको न्वारान गर्दा धेरै सोचियो । साथीभाइसँग छलफल पनि गरियो । तर केही सिर्जनात्मक ढङ्गबाट नाम जुरोस् भन्ने विचारले सुरूको लघुकथा चोट र अन्तिमको लघुकथा मृत्यु राखेर यो लघुकृतिको नाम चोटदेखि मृत्युसम्म जुराएकी हुँ । लघुकथाप्रति मेरो रूचिले यो कृति आएको हो । साहित्य समाजको ऐना हो, त्यसैले लघुकथाका माध्यमबाट नेपाली समाजको मुहार खोज्न पाठकले यो कृति पढून् भन्न चाहान्छु ।
साहित्य सिर्जना हो, यसै ठोकुवा गर्न सक्तिनँ । लघुकथाको विकास र विस्तारको लागि भनेर फेसबुज पेज हाम्रो लघुकथा पाठशाला खोलेकी छु । समय र अवस्थाले साथ दिएसम्म त्यसैमा डुबुल्की लगाउँछु कि ?
मनको लड्डू घिउसँग खाने सोच र बानी मेरो छैन । अवस्थाले नगदको खर्च तय गर्छ । तैपनि व्यक्तिगत सोच भन्नै पर्ने हो भने हाम्रो लघुकथा पाठशालाको विविध कार्यक्रम सञ्चालनमै प्रयोग हुनेछ ।
त्यस्तो योजना त अहिलेसम्म केही बनाएको छैन । सायद लेखन पठनलाई नै सहयोग हुने ठाउँमा खर्च गर्छु होला
लघुकथाः मोबाइलको सदुपयोग !